Iimpawu, indawo yokuhlala, ukondla kunye nokhathalelo lwentlanzi | Ngeentlanzi
Intlanzi yomnyama yenye yezona ntlobo zintle zeentlanzi zamanzi angenawo amanzi ehlabathini. Inemibala emininzi yesikhumba sayo (yiyo loo nto igama layo) kwaye inokubamba nabani na. Igama layo lenzululwazi ngu UMelanotaenia boesemani kwaye ilungele i-aquariums, kuba iya kunika igalelo elihle lokuhombisa. Impumelelo yayo kwi-aquarium ibinkulu kakhulu kwaye iye yaba yenye yezona ntlanzi zaziwayo phakathi kwevenkile ezinikezelwe kwivenkile yeentlanzi.
Kule nqaku siza kuhlalutya ngokucacileyo iimpawu zale ntlanzi, indlela yokuphila kunye nokunyamekela okufunekayo ekuthinjweni. Ngaba uyafuna ukufunda yonke into malunga neentlanzi zemnyama? Qhubeka ufunde 🙂
3 Ukutya iintlanzi zemvula
4 Unonophelo oluyimfuneko
Njengoko sinokubona kule webhusayithi, zonke iintlanzi zahlukile kwezinye kumgangatho okhethekileyo. Ukubonakala kwale ntlanzi kucaba kwaye kumile okweqanda. Icinezelwe emacaleni. Inika i-physiognomy eyakhiwe kakuhle, kuba ayibonisi mahluko phakathi kwendawo yangaphakathi kunye neendawo zomoya. Njengokuba ixesha lihamba, umva ubonelela ngeqhuma elincinci elisivumela ukuba siqikelele ubudala beentlanzi. Ukubonakala kolu hlobo lweqhuma kunxulunyaniswa neentlanzi zobudala obukhulu.
Inika amaphiko amabini emqolo kunye nelinye i-anal. Isiphelo sokugqibela kukuqhubeka komzimba wakho. Iqala embindini kwaye inomsebenzi obaluleke kakhulu. Ngombulelo kuyo, iintlanzi zinokufumana amandla okuziqhuba ngesantya esiphezulu ukudada. Ngamaphiko emqolo akhokela intshukumo. Intlanzi yomnyama ayinkulu kakhulu, kodwa isahamba ngokukhawuleza okukhulu.
Ngokumalunga nomlomo, unomsebenzi okhethekileyo: umncinci kakhulu. Ngaphandle koku, unomdla omkhulu. Inotyekelo oluphezulu, oluhambelana kakhulu nohlobo lokuziphatha elinalo xa kufikwa ekutyeni. Iintlanzi zeRainbow ziyakwazi ukutyisa zonke iintlobo zokutya ezifumaneka ngaphezulu. Ngenxa yokuthambeka komlomo, akunakwenzeka ukuba batye ukutya okusemgangathweni.
I-rainbow fish luhlobo olunamanani amancinci. Ubungakanani bentlanzi yomnyama ihamba phakathi kweesentimitha ezi-6 kunye neesentimitha ezili-12 malunga. Olu phawu luyenza ibe yenye yezona ntlanzi zintandokazi zokuzalisa ngokuhombisa, kuba abafumani miqulu mikhulu kwaye banokugcinwa kwiindawo ezinamanzi aphakathi.
Ezi ntlanzi zinendawo encinci yokuhanjiswa, kuba iindawo abahlala kuzo zinqabile. Zihlala zifumaneka kwindawo esempuma mpuma yeAsia kwiindawo ezintathu: I-Indonesia, i-Australia kunye neNew Gini. Amachibi apho anokufumaneka khona Ajamaru, Aintijo kunye Hain.
Ngokubhekisele kwindawo yokuhlala, zihlala zihlala kwindawo ezinamanzi acwengileyo. Ngaphandle koku, ayisiyiyo yonke imilambo iindawo zokuhlala ezifanelekileyo kwezi ntlanzi. Bahlala kuphela kwimilambo ethile eneempawu ezithile. Umzekelo, enye yeemfuno eziphambili zokuba umlambo ufaneleke yi-pH. Ke bayakwazi ukugcina iintlanzi zomnyama, amanzi kufuneka ahlale kunye noluhlu lwe-pH phakathi kwe-6 kunye ne-7.
Ubushushu bukwanomda. Umgangatho malunga ne-15 degrees. I-crystalline ngakumbi kunye nococeko, kokukhona kuya kuba kuhle kuphuhliso. Le ntlanzi yasemanzini ayihlali idada enzulwini ukusukela, njengoko besesitshilo ngaphambili, ayinakho ukondla ukutya okuvela kwi-substrate ngenxa yokuthambeka komlomo wayo.
Enye into efunwa yindawo yokuhlala kukuba kufuneka babe nezityalo ezininzi zasemanzini kunye lkubushushu bamanzi bujikeleze i-22-26 degrees. Ngamanye amaxesha banokugcinwa kumaqondo obushushu angama-28 degrees, nangona ukukhula kwabo kungalunganga.
Ukutya iintlanzi zemvula
Njengoko kunokuncitshiswa, ukutya kukutya omnivorous. Ingatya izilwanyana ezincinci kunye nezityalo zasemanzini. Ayibonisi nayiphi na ingxaki xa kufikwa ekukhetheni ukutya okutyiwa mihla le. Udinga ukutya okunesondlo okunezondlo. Ukuba kunjalo, ukuqaqamba kwezikali zakho kuya kuba namandla ngakumbi kwaye imibala inomdla ngakumbi.
Ukondla kwi-aquarium, kuya kufuneka ukhethe ngononophelo ukutya okuza kunikwa. Kufuneka zitshintshwe kwaye akunamsebenzi nokuba ngaba ziyimveliso ekhenkcezisiweyo okanye imveliso ehambileyo. Zombini ezi mveliso zibonelela kwaye zihlangabezana neemfuno zentlanzi yomnyama kakuhle. Nokuba uyafuna, unokuxuba ukutya kwiflake okanye kwifom yegranule. Unokubanika kwakhona inyama yentlanzi okanye i-shrimp encinci.
Kaninzi kangaphi kufuneka ondliwe amaxesha amaninzi ngemini. olona lucetyiswayo amaxesha amathathu. Kubalulekile ukuba ukutya kungahlala kumisiwe emanzini, kuba abanakutya ukutya kwi-substrate ngenxa yokuthambeka komlomo. Ke ngoko, nakuphi na ukutya okuwela ezantsi akunakunceda kwaye ekuphela kwento eya kuyenza kukungcola i-aquarium. Ukuthintela ezi ngxaki, banikwa ukutya okuncinci kwaye ke ukuthintela ukuba kwehle kuye ezantsi.
Umba wokutya unokuba yingxaki ukuba sikudibanisa nezinye iintlanzi. Nangona ziyintlanzi ekuhlaleni, ziyothuswa kukuphakama kwezinye iintlanzi xa kusiziwa ekutyeni. Banokuhlala bengcwatyelwe kwi-aquarium kwaye bangenzi indlela yabo ngaphezulu.
Ukuze intlanzi imnyama izive isekhaya, i-aquarium kufuneka ibenendawo eyaneleyo yokuqubha. Malunga neelitha ezingama-200 zihamba kakuhle. Ubude be-aquarium kufuneka ubuncinci bube yimitha enye. Amanzi kufuneka afakwe ioksijini ngesihluzi esifanelekileyo. Icebo lokucoca ulwelo lifuna yongeza intshukumo emanzini amaxesha ama-3 okanye ama-4 ngeyure. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise umbala omnyama ongaphantsi ukuze umbala wentlanzi ume ngakumbi.
Ukulima kweentlanzi zemvula kufuneka kucingwe ngababini malunga nokuzala kwabo kwikamva. Ukuba uneentlanzi ezininzi zomnyama, kubalulekile ukuba uvumele ezo ntlanzi zenze amakhonkco. Ukubeka endaweni yabo okanye kwindawo yabucala ngakumbi kwenza ukuba kuzalwe inzala entsha.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokuyinyamekela kakuhle intlanzi yomnyama kwaye wonwabele imibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yomnyama